Ryan Reynolds sy Blake Lively: manampy ireo vehivavy mpandraharaha
Nanolotra vola mitentina 200.000 dolara ho an’ny “Coady Institute” an’ny St Francis Xavier any Nouvelle Ecosse i Ryan Reynolds sy Blake Lively vadiny.
1. Queens, 50 taona : Hisy hajia hanomezam-boninahitra azy
Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny tsingerintaona faha-50 nisian’ny tarika Queen dia manomana ny hanome voninahitra azy ireo ny paositra britanika.
Kylie Jenner, miliaridera : inona no handaniany ny volany ?
Rehefa nivoaka ny lisitr’ireo tanora miliaridera dia loha-laharana tamin’izany i Kylie Jenner. Nandeha nefa ny fanadihadihana dia fantatra fa tsy mahatratra ilay tarehimarika hahafahana mametraka azy ho eo amin’io laharana
Gwyneth Paltrow : hamoaka labozia hamofona ny fahafinaretana faran-tampony
Hamoaka labozia vaovao indray ilay mpilalao sarimihetsika Gwyneth Paltrow ka hitondra ny fofon’ny fahafinaretany faran-tampony izany.
Joshua Jackson, Usain Bolt..: nankafy ny fetin’ny ray niainany voalohany
Ho an’ireo olo-malaza sasany dia nihavaka ny fankalazana iny fetin’ny ray omaly iny. Misy tamin’izy ireo mantsy no izay vao niteraka ary fantatra fa mankafy izany fotoana voalohany mamy iarahany amin’ny zanany izany izy ireo. Isan’ireo nankalaza izany fety voalohany izany ireto entina aminao ireto:
Tselonina Ramanantselonina : « Fanambarana goavana : Izaho Tselonina dia manao izao fanambarana izao : Izao vao tena ritra sy tapitra tanteraka ny anjara-taokako teto an-tany, koa isaorako etoana ny zava-bitany tamiko toy ny :
- fahafaham-baraka, teny maloto, tsy fanajana fiaraha-monina nefa kosa tsy azo adino ireo hira sy kanto vitany. Natao ity fanambarana ity, tsy an-tery fa an-tsitrapo, ary manan-kery mandra-pahalasako »
Fanambarana feno fanetren-tena sy fahatsapana fa tsy nitondra soa ho azy ny toaka no nataony. Nohamafisiny izany tamin’ny resadresaka nifanaovanay taminy :
Hoy i Tselonina nanazava
Fanambarana tena nataoko tamin’ny nahim-poko mihitsy izy io. Tsy noho ny zava-misy eto amin’ny firenena na noho ny famporisihin’ny olona iray akory. Tsapako fa tsy mety amiko intsony ilay alikaola. Nisy fotoana aho nanao « cabaret » nefa mamo. Nalahelo sy diso fanantenana tamiko ireo mpankafy ahy tamin’izay satria tsy nahavita nitendry sy nihira akory aho. Izay no tena nahatonga ahy tapa-kevitra ny hijanona. Ilay fitiavako hanome fahafaham-po ireo mpankafy ahy sy ny kanto ataoko.
Efa nanandrana niala taloha
Tsy vao in-dray mandeha no niezaka ny hiala amin’ny fisotroana toaka ity mpanakanto ity. Hatramin’izy mbola tanora mantsy no efa tafalatsaka tao anatin’izany. Mbola izaho virijiny kely no efa nisotro hoy ny filazany. Ity fanambarana nataony tamin’ny tambazotra sosialy ity no heveriny fa fifamatorana sy fanomezan-toky eo aminy sy ireo mpankafy. Ho sarotra aminy kokoa ny tsy hanatanteraka io toky efa nomeny io, araka ny filazany.
Tsy ho lasa mpihira evanjelika
Fanontaniana efa nipetraka teo am-bavan’ny maro izay nahita ny vaovao ihany koa ny hoe : mety ho lasa mpihira evanjelika ve izany i Tselonina. Nanamafy nefa ity mpivohy ny vazo miteny ity fa tsy hirona amin’izany ny tenany. « Tsy ny hira evanjelika no tsy tiako akory, hoy izy fa tsy ao anatin’ny hira foroniko fotsiny izany ».
Tsy hanova n’inona n’inona amin’ny famoronany hira ny fijanonany tsy hisotro. Vao mainka aza hihatsara hoy izy. Ary nisy fotoana izy efa nijanona tsy nisotro nandritra ny herintaona sy tapany fa nahavita namoron-kira nipoaka be toa an-dry « Moly Be ». Efa talenta ato anatiko ny famoronana hoy i Tselonina. Miketrika raki-kira vaovao hanambarana ireo hirany izany izy amin’izao fotoana fa mandeha ihany koa ny « cabaret » sy ny sisa.